राती १० वजे देवरले गरे आफ्नै आमा समान भाउजुलाई ……. – Khabar Patrika Np
राती १० वजे देवरले गरे आफ्नै आमा समान भाउजुलाई …….
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २०, २०७७ समय: १०:३१:५२
उसले आफै गल्ती गरेर के प्रमाण छ जे सुकै गर भन्दै हिडेको उनले बताइन् । घटना पछि महिलाले अरु गाउँलेलाई बोलाउन थालेपछि देवर भा ग्न लागेको बताइन् । उनले त्यसको पछि पछि गएर प्रमाण सहित उसलाई पक्राउ गर्न थालेको बताइन् ।